रोचक – ताजा समाचार
एक जना डाक्टरकी विधवा महिलाले श्रीमानको मृत्युपश्चात् ८० जना विवाहित पुरुषहरुसँग ‘लसपस’ रहेको खुलासा गरेकी छिन् । ४३ वर्षकी लुइस भान डेर भेल्डेले हरेक दिन दर्जनौँ व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा गरेकी हुन् । उनका अनुसार भ्यालेन्टाइन डेपछिको हप्ता प्रायः सम्बन्ध गुमेका मानिसहरुको लागि नयाँ सम्बन्ध खोज्ने समय भएकाले उनी व्यस्त हुन्छन् । उनले आफूलाई से$क्स […]
सुपरहिरो बनेर कोरोनासँग लड्ने मोडल डेमी रोजको इच्छा
एजेन्सी । मोडल डेमी रोजले सुपरहिरो बनेर कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छन्। डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार डेमी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर इन्स्टाग्राममार्फत प्रशंसकलाई आफ्ना तस्बिर र दैनिक गतिविधि सेयर गरिरहेकी छन्। २५ वर्षीया यी मोडलले हालै आफ्नो एक सुन्दर तस्बिर पनि पोस्ट गरेकी छन्। यसमा उनले रातो पहिरनमा कपाल छोडेकी छन्। कोविड १९ महामारीबारे […]
कोरोनाको कारण बिहे रोकिएपछि पोर्न स्टार मिया खालिफाले लेखिन् मनछुने स्टाटस्
काठमाडौं। एडल्ट फिल्म स्टार मिया खलिफाले यही वर्ष बिहे गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । ब्वाइफ्रेण्ड रोबर्ट सेन्डबर्गसँग उनको ही जूनमा बिहे हुनेवाला थियो । तर, कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण उनको बिहे स्थगित भएको छ । यसको जानकारी उनले सामाजिक संजालमार्फत दिएकी हुन् । मिया खलिफाले इन्स्टाग्राममा आफ्नो एक तस्वीर शेयर गर्दै आफ्नो बिहे स्थगित भएको बताएकी […]
पसलमा कोरोना मिठाई बनाएर धमाधम बेचिदै, तस्बिर बन्यो भाइरल
एजेन्सी – धेरैलाई मिठाई भनेपछि निकै मन पर्छ । स्वादमा गुलियो हुने मिठाई नखाने कमै छन् होला । बजारमा राखिएका अनेक थरिका मिठाईहरु मानिसले किनेर खाएका हुन्छन् । केहीले त घरमै मिठाई बनाएर पनि खान्छन् । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण धेरै देशहरु प्रभावित भएका छन् । कोरोनाभाइरसको रोकथाम गर्न विभिन्न सचेतनामुलक कार्य पनि […]
कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउनेलाई यी पोर्नस्टारले ओछ्यान तताइदिने घोषणा
चीनको वुहान सहरबाट पूरा दुनियाँमा फैलिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको छ। यो भाइरसले ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। लाखौं संक्रमित भएका छन्। कोरोना फैलनबाट रोक्न धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ। सबै देश यो संक्रमणबाट बाँच्ने भ्याक्सिनको खोजीमा जुटेका छन् तर अहिलेसम्म कसैलाई सफलता प्राप्त भएको छैन। यसैबीच एक अंग्रेजी वेभसाइटमा प्रकाशित खबरले सबैलाई […]
काठमाडौं । सरकारले एसईई लगायत पूर्वनिर्धाति सबै परीक्षा अर्को निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले एसईई लगायतका सबै परीक्षा हालका लागि स्थगित गरेको हो। यो निर्णयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वनिर्धारित परीक्षा समेत स्थगित भएका छन्। यसअघि आजै दिउसो उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको […]
कोरोना प्रभाव : यि चर्चित पूजारीले भगवानको मूर्तिलाई पनि लगाइदिए मास्क
ताजा समाचार । ४ चैत काठमाडौं (एजेन्सी) : भारतमा भगवानको मूर्तिलाई पनि मास्क लगाइदिएको अचम्मको घटना र तस्विर सार्वजनिक भएको छ । सबैतिर कोरोना भाइ* रसको असर देखिएका कारण मानिसलाई जागरुक गर्नका लागि भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित वाराणसीमा एउटा मन्दिरका पुजारीले भगवानको मूर्तिमा पनि मास्क लगाइदिएको समाचारमा जनाइएको छ । वाराणसीस्थित पहलादेश्वर महादेव मन्दिरका पुजारी […]
तपाईलाई थाहा छ ? महिलाहरुले ब्लाउजभित्र पैसा घु’साएर किन राख्छन् ?
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी प’क्षपाती हुँ । मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका महिलाका लागि भने नहुन पनि सक्छ । उनीहरुलाई लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्नु […]
१. खल्ती खाली होस् तर पनि आवश्यकतामा दिन्न भनेको देखिन; बुवा हजुर भन्दा धनि यो संसारमा अर्को भेटिन मैले । २. यो संसारमा वुवा मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बच्चाले आफूले भन्दा बढी सफलता हासिल गरोस भनेर कामना गर्नुहुन्छ । ३. बुवा त्यो निमको पात जस्तै हो; भलै त्यो तितो होस तर त्यो तितोले […]
तना वमा हुनुन्छ यसो गर्नुस ,दिमागलाई सन्तुलित बनाउन
मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागी धेरै सपनाहरु देखेका हुन्छन् । उनीहरु जीवनमा केहि कुरा हाशिल पनि गर्न चाहन्छन तर ति कुराहरु पाउन अथवा सफलता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो पनि हुदैन । त्यसको लागी धेरै परिस्थितिहरुको सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा साना ठुला समस्या हरुको सामना गर्दै जादा […]
लिं*गको आकार यस्ता चाहिने : महिलाको धारणाले वैज्ञानिकहरूनै अचम्मित
एक अनुसन्धानबाट आएको परीणाम देखेर वैज्ञानिकहरू पनि अचम्मित भएका छन्। बेलायतमा गरिएको अध्यनमा यौ -न सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले ६ दशमलव ३ इन्चको आकारलाई सही बताए। यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले ६ दशमलव ३ इन्चको लिं- गलाइ उपयुक्त मानेका छन्। कसैको लिं- गको आकार ६ दशमलव ३ वा ६ दशमलव ४ नभए पनि आत्तिनु भने पर्दैन। […]
१९ वर्षे छोरीभन्दा ४३ वर्षीया आमा तरुनी, झट्ट सुन्दा विश्वास नलागे तस्विर हेर्नुहोस
कुमार बस्नेतले केहि दशक अगाडि एक गीत भनेका छन्, छोरीभन्दा आमा तरुनी… । त्यसबेलाको यस गीतलाई सार्थकता प्रदान गरेको छ, क्यालिफोर्नियाको एक आमाछोरीको तस्वीरले । जहाँ १९ वर्षीया छोरीभन्दा ४३ वर्षकी आमा तरुनी देखिएकी छन् । पश्चिमी अमेरीकी राज्य क्यालिफोर्निया निवासी ४३ वर्षीया आमा जोलिन डियाज आफ्नी १९ बर्षिय छोरी मिलानीभन्दा जवान देखिएकी छन् । […]